ဗြောက်အိုးဖောက်ကစားရာမှ ကလေးငယ်တစ်ဦး မျက်စိတစ်ဖက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံး - MM Live News
ဗြောက်အိုးဖောက်ကစားရာမှ ကလေးငယ်တစ်ဦး မျက်စိတစ်ဖက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံး
ဗြောက်အိုးဖောက်ကစားရာမှ ကလေးငယ်တစ်ဦး မျက်စိတစ်ဖက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံး / အောက်တိုဘာ-၇
မုံရွာမြို့နယ် မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် အောင်ဇေယျုံနယ်မြေ၌ ကလေးငယ် တစ်ဦးသည် မီးရှို့ထားသော ဗြောက်အိုးကို မပေါက်ကွဲဟုအထင်ဖြင့် ယူဆောင်စဉ်ပေါက်ကွဲသဖြင့် ကလေးငယ်မှာ မျက်စိတစ်ဖက် ထိခိုက် ပျက်စီးသွားကြောင်း ရာသက်ပန်လူမှုကူညီရေးအသင်း(မုံရွာ)မှ သိရ သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မုံရွာတောင်ရပ်ကွက် အောင်ဇေယျုံနယ်မြေနေအိမ်တစ်အိမ် ရှေ့တွင် ကလေးငယ်နှစ်ဦးသည် ဗြောက်အိုးဖောက် ဆော့ကစားစဉ် မီးရှို့ထားသော ဗြောက်အိုး မပေါက်ကွဲဟု အထင်ဖြင့် သွားရောက်ယူဆောင်စဉ် ပေါက်ကွဲသွားသဖြင့် မောင်မြင့်မြတ်(၇)နှစ်မှာ မျက်စိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
၎င်းနှင့်အတူ ဆော့ကစားသည့် (၈)နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိခဲ့သည်။သူတို့က ဖြစ်ဖြစ်ချင်း မျက်စိဆေးခန်းသွားတယ်။ စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့အသင်းကားနဲ့ မုံရွာကနေ မြင်းမူထီးဆောင်း မျက်စိဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထီးဆောင်းဆေးရုံ ကလည်း မန္တလေးကို လွှဲတဲ့အတွက် မြင်းမူမြို့နယ်က မြတ်သုခ ပရဟိတအသင်းကို အကူအညီတောင်းပြီး မန္တလေးဆေးရုံကို ထပ်ဆင့်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ကလေးက ယာဘက်မျက်စိလုံးဝ ပျက်စီး သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်’ဟု ရာသက်ပန်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ကိုသော်တာက စံတော်ချိန်သို့ ပြောဆိုသည်။
အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ည ၈ နာရီခန့် ကလည်း မုံရွာမြို့ထန်းတော ရပ်ကွက် နယ်မြေအမှတ် (၇)ရွှေသိမ်တော်လမ်းကြား မိုဃ်းကောင်း (အေးစေတီ) အုတ်တံတိုင်းအနီး ဗြောက်အိုး တစ်လုံးအား ပစ်ဖောက်ရာမှ ဗြောက်အိုးယမ်းစများ ထိမှန်ပြီး လူငါးဦးဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း မုံရွာ နယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
နိုင်ဝင်းစိုး / စံ​တော်​ချိန်— with Zin Min Tun.
ေျဗာက္အိုးေဖာက္ကစားရာမွ ကေလးငယ္တစ္ဦး မ်က္စိတစ္ဖက္ ထိခိုက္ဆုံးရွုံး / ေအာက္တိုဘာ-၇
မုံရြာၿမိဳ့နယ္ မုံရြာေတာင္ရပ္ကြက္ ေအာင္ေဇယ်ဳံနယ္ေျမ၌ ကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္ မီးရွို့ထားေသာ ေျဗာက္အိုးကို မေပါက္ကြဲဟုအထင္ျဖင့္ ယူေဆာင္စဥ္ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ကေလးငယ္မွာ မ်က္စိတစ္ဖက္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း ရာသက္ပန္လူမွုကူညီေရးအသင္း(မုံရြာ)မွ သိရ သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက မုံရြာေတာင္ရပ္ကြက္ ေအာင္ေဇယ်ဳံနယ္ေျမေနအိမ္တစ္အိမ္ ေရွ႕တြင္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးသည္ ေျဗာက္အိုးေဖာက္ ေဆာ့ကစားစဥ္ မီးရွို့ထားေသာ ေျဗာက္အိုး မေပါက္ကြဲဟု အထင္ျဖင့္ သြားေရာက္ယူေဆာင္စဥ္ ေပါက္ကြဲသြားသျဖင့္ ေမာင္ျမင့္ျမတ္(၇)ႏွစ္မွာ မ်က္စိထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
၎ႏွင့္အတူ ေဆာ့ကစားသည့္ (၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ ရရွိခဲ့သည္။သူတို့က ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း မ်က္စိေဆးခန္းသြားတယ္။ စိုးရိမ္ရတယ္ဆိုလို့ ကၽြန္ေတာ္တို့အသင္းကားနဲ႔ မုံရြာကေန ျမင္းမူထီးေဆာင္း မ်က္စိေဆး႐ုံကို ပို့ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ထီးေဆာင္းေဆး႐ုံ ကလည္း မႏၲေလးကို လႊဲတဲ့အတြက္ ျမင္းမူၿမိဳ့နယ္က ျမတ္သုခ ပရဟိတအသင္းကို အကူအညီေတာင္းၿပီး မႏၲေလးေဆး႐ုံကို ထပ္ဆင့္ပို့ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကေလးက ယာဘက္မ်က္စိလုံး၀ ပ်က္စီး သြားတယ္လို့ သိရပါတယ္’ဟု ရာသက္ပန္လူမွုကူညီေရးအသင္းမွ ကိုေသာ္တာက စံေတာ္ခ်ိန္သို့ ေျပာဆိုသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔ ကလည္း မုံရြာၿမိဳ့ထန္းေတာ ရပ္ကြက္ နယ္ေျမအမွတ္ (၇)ေရႊသိမ္ေတာ္လမ္းၾကား မိုဃ္းေကာင္း (ေအးေစတီ) အုတ္တံတိုင္းအနီး ေျဗာက္အိုး တစ္လုံးအား ပစ္ေဖာက္ရာမွ ေျဗာက္အိုးယမ္းစမ်ား ထိမွန္ၿပီး လူငါးဦးဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း မုံရြာ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ သိရသည္။
နိုင္၀င္းစိုး / စံ​ေတာ္​ခ်ိန္— with Zin Min Tun.
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရွှေတွေယူ လူသတ်မှုသတင်းအပြည့်စုံ
နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အင်အားပြင်ထန်ဆုံး စူပါမုန်တိုင်း
January 16, 2019 MM Live News
ယေန႕ေျမာက္ဦးတိုက္ပြဲ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္
February 20, 2019 MM Live
လူသတ္မုဒိမ္းက်င့္သူတရားခံႏွစ္ေယာက္ကို ထိေရာက္တဲ႔ျပစ္ဒဏ္ေပးမွေက်နပ္မယ္လို႔ ကာယကံရွင္ မိသားစုေျပာ